Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba | OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA
Ummanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba.
Murni weerartuun Tigraayirraa ummata Oromoottu duultee ummata Oromoo gabroonfattee saamaa turtee fi jirtu wayyaaneen waggoottan 25n darbaniif waan ishiidhaa danda’ame hundaa ummata Oromoo fi saboota akka Oromoo cunqursaa jala jiranirratti raawwatteetti. Bara bittaa fi saamichaa kana keessa hidhaa dabalatee,dararaan,ajjeechaan,saamichii
fi Oromoo qayee fi qabeenmyarraa godaansisuun hojii ijoo murna tanaa ture. ammas itti jirti Wayyaaneen kan ofii ajjeeftu, hiitu, darartuu fi saamtu caalaa, ergamtoota saboota adda addaarraa garaan sossobuun ofitti qabde, bor hin beeknee hedduu leenjiftee, hidhachiiftee ummata Oromootti bobbaasaa turtee jirti, bobbaasaas jirti. Akkuma beekamu gama lixa Oromiyaan saba Gumzirraa ergamtoota walitti qabuun meeshaa waraanaa hidhachiiftee ummata Oromoo naannichaa rukuchiisaa turteetti. Kaabaa fi kaaba baha Oromiyaatiin ammoo Amaaraa fi Afaarirraa haaluma walfakkaatuun ergamtoota, garaaf bultoota sassaabdee, leenjiftee, hidhachiiftee ummata Oromoo walloo fi Karrayyuurratti duulchisaa turte. Ammalleen hin dhaabbanne.
Murni shiraaf ijaaramtee, shiraan guddattee, shiraan amma har’aa geeche tun kaayyoon ishii ijoon yoo dandeeche saba Oromoo quucarsuun bara baraaf mataa gadi qabatee akka tole jedhee gabrummaa keeessa jiraatu waan ta’eef yakka ofii waraana ajjeechaa namaaf qofa leenji’e kan dhalattoota Tigraay qofarraa filame kan Tigrootaan ajjajamu Aga’aazii bobbaasuun ummata Oromoo fixaa jirtu cinaatti saboota ollaa Oromoo jiraataa turan fuunduraafis jiratan, saboota bara rakkoo fi gammachuu waliin dabarsan, kan hadhaa gabrummaa waliin dhandhaman keessaa ergamtoota walitti qabdee leenjiftee Oromootti bobbaasun yakka danuu hojjechaa turte, hojjechaas jirt. Akkuma hunduu quba qabutti dhiheenyuma kana gama baha Oromiyaa fi kibba baha Oromiyaatti akkuma kanaan dura barte waraana waggoota hedduuf qallaba safartee, leenjiftee, hidhachiisaa turte, kan saba Sumaaleerraa garaaf bultoota walitti qabdee leenjifte waraana Liyyuu Hayil ykn liyyuu Poolisi jedhamu Oromootti bobbaaftee Ummata Oromoo naannoo bahaa fi kibba bahaa jiru goolaa jirti, ykn rukuchiisaa jirti.
Akkuma hunduu quba qabu waraanni ajjeechaa mi’eeffate Aga’aaziin kan dhalattoota ilmaan Tigraayirraa ijaaramee wayyaanootumaan ajajamuu fi waggoota 25n darbaniif ummata Oromoo goolaa turee fi jiru yeroo ammaa kana ammoo maqaa labsii yeroo muddamaatiin gutuu Oromiyaa keessatti goolii uumaa jira. Ni saama, ni ajjeesa, ni hidha, ni darara, dubartoota humnaan qabee gudeeda. Murni Wayyaanee yakka Aga’aaziin dalagaa turee fi jiruun quufuu dadhabde akkuma yeroo ammaa kana muldhachaa jiruu fi ummanni Oromoo quba qabutti waraana liyyuu Poolisi/ykn Hayil jedhamu kan Sumaaloota keessaa garaaf bultoota filuun qaadimattee leenjifteen haaluma walfakkaatuun ummata Oromoorratti hidhaa, ajjeechaa, ukkaamsanii essa buutee dhabamsiisuu, ibiddaan mana keessa sa’aa- nama gubuu, dubartoota humnaan gudeedsiisuu, qabeenya Oromoo saamuu fi qayeerraa Oromoo har’aanii Sumaaloota irra qubachiisuu raawwachaa jirti. Kun roorroodha, roorroo dachaadha! Tuffii guddaadha. Maal fida jedhanii namatti roorrisuudha.
Gadootti nama ilaaluudha!
Wayyaaneen diina ummata Oromoo innikkaadha, diina innikaa ta’uu ishiif ammoo raga yoo lakkaawuun barbaachise.. tokko .. lama jedhanii yakkoota waggoota 25n darbaniif raawwachaa turaniif jiran tarreessutu danda’ama. Wayyaaneen yakki waggoottan 25n darbaniif itti turte hanqannaan kunoo ammas karaa gara jabinaa fi hammeenyummaa ishii caalaatti argisiisuu fi saaxiluun duula ballaa bitaa fi mirgaan ummata Oromoorratti karaa ergamtoota ishii gaggeessaa jirti.
Hara’a ummanni Oromoo mootummaa wayyaanee keessaa nama isaaf dubbatu hin qabu, kan maqaa Oromootin sirna wayyaanee keessa jiru kan isa saamsisu, kan isa ajjeechisiisu, kan isa dararsiisuu fi lafa abbaa isaarraa akka buqqaafamuuuf irratti hojjetu kan akka OPDOti. OPDOn hojiin ishiin itti jirtu caalaattuu akka diinni Oromoo biyya dhablee taasiisu gargaaraa jirti. Kan Oromoo diina dura fiiguun qawwee hikkachiisaa jiru OPDOdha. OPDOn diina innikaa Oromoo wayyaanee waliin taatee daba seenaan hin daganne Oromoorratti raawwachaa jirti.
Sirna sana keessaa lakkii kan ummata Oroomoorratti raawwachaa jiru kun sirrii miti kan jedhu hin jiru. Amma Oromoon wal malee Homaa hin qabu. Yoo waliif mirmate malees sirna abbaa irree fi saamichaa wayyaanee jalaa bahuun ulaafaatadha. san keessaa kan Ummanni Oromoo biyya keessas alas jiru dhugaa akkasii dhugaa wal malee qabaachuu dhabuu kana caalaatti hubachuu feesisa. Amma duulli gara hundaa kan Oromoo biyya dhabsiisuu fi ummata Oromoo yoo danda’an xiqqeessuuf hojjetamaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Wanti argaa jirru, maastar pilaaniin Oromiyaa iddoo lamatti kutuu fi handhura Oromoo Finfinnee teessoo halagaa taasisu; dhiiga ilmaan Oromootiin harkaa fashallaan wayyaaneen gama Sumaaleetiin warra biyya urjii 5ni,Sumaalee guddittii lafa Oromoo amma Awaashitti kutee fudhatee ijaaruuf tattaafachaa turee fi qabsoo Oromootin kufee ture Wayyaaneen deebiftee ijaaruu fi hidhachiisuun haloo Oromoorraa qabduun kunoo bahaa fi kibba bahaan Oromootti duulchisaa jirti. Haata’uutii garuu gooticha ummanni Oromoo naannichaa weertoota sumaalee warra liyyuu hayil jedhaman kana akkuma kanaan dura godhaa ture ofirraa rukutee deebisaa jira. Fuunduraafis uammanni Oromoo wayyaanees ta’e ergamtoota isaanii warra liyyuu hayil jedhamanis ta’e Aga’aazii isa goolaa jiru karaa hundaanuu ofirraa ittisee biyya abbaa isaa dhuunfachuun kan jabaatee itti fufu malee kan dhaabbatuu miti. Akka jabaatee itti fufuuf ammoo Oromoon bakkayyuu jiru qabsoo isaa finiinsee itti fufuun dirqama lammumaati!
Diinni akkauma argaa jirru gama tokkoon nu dadhabnaan, gama biraan nu yaalaa jira. Nugabroonfatee bara bittaa dheereeffachuuf si’achis yakkoota hedduu ofiifis karaa ergamtoota isaas nurratti raawwachuu danda’a. Dhalataan Oromoo martuu kana beeknee yeroo maraa dammaqiinsaan wal ijaarree bakka jirrutti of ittisuuf socho’uun dirqamaa fi dubbii fardiidha. Diina gamaa-gamasii nutti bobba’ee jiru sodaa fi mamii tokko malee akka dhufaatii isaatii irree tokkoon ofirraa ittisuu qabna. Ittisaas jirra, garuu caalaatti cimee diinoota keenyatti xumura gochuu qabna. Bara baraan gabroonfattoonnii fi ergamtoonnii isaanii nurartti roorrisuu hin qaban. Kanaafuu irreen keenya, gamtaan qabsaawoota bilisummaa haa cimu. Afaan tokkoon, irree tokkoon diinarratti haa qiyyaafannu.
Previous PostMiseensoonni fi Hogganni Hidhaman Gadhifamanii Jiru: Paartii MormituuNext PostUmmanni Oromoo Akkuma Saba Addunyaarra jiru Kamiituu Mirga of Ittisuu Qaba